I-Semalt ichaza izinto okufanele uzicabangele uma ufuna igama elifanele lesizinda
Uma ucabanga ukusungula khona inthanethi, into yokuqala kufaneleyenza ukubhalisa isizinda sakho. Ukukhetha igama lesizinda kubalulekile ngoba kuzokwenzakungenza wenze uphumelele noma uhluleke ekusebenzeni kwakho. Igama lesizinda liqinisekisa ukuthi ku-intanethi yakhoubukhona, okwenza iwebhusayithi yakho ibonakale - az appraisal group. Ukufuna igama lesizinda elilungile,hlola ezinye izici, ukuthi Semalt Amasevisi weDividt ehola uchwepheshe, uJulia Vashneva, uncoma ukuba ucabangele.
Ukuthola inkampani ethembekile kubalulekile. Ngokuvamile ezinye zezinkampani ziqala ukukhangisa zazoizinsizakalo ngokweqile, futhi ngokuhamba kwesikhathi, ukubambisana nabo kuba yisihloni. Ngokolunye uhlangothi,ezinye izinkampani zikhokhisa amanani aphakeme kodwa azihlinzeki ngamasevisi okufaneleka. Yenza isheke sangemuvaenkampanini ongathanda ukusebenza nayo ukuze wazi iqiniso ngakho.
Uma usenkonzweni yokubhalisa igama lakho lesizinda, ukhetha igamakungaba yinselele ngezinye izikhathi. Okudingayo ukucabangela ukuthi igama kufaneleKulula ukukhumbula futhi ube nokuxhumana okude nomsebenzi webhusayithi yakhokufanele senze. Ukwengeza, kufanele futhi kube negama ngegama elilula ukulihlola.
I-copyright yegama lesizinda
Qinisekisa ukuthi igama lesizinda olikhethayo alilona ilungelo lomunye umuntu njengalokhuingase ikulethele izinkinga zomthetho. Kuyoba kuhle ukuqinisekisa ukuthi inkampani, okuyiyoukhethe ukubhalisa kwesizinda sakho, uye wachaza ngokucacile inqubomgomo yomsebenzisi kumagama wesizindabahlinzeka. Yenza isinqumo esifanele sokwandiswa ukuze uyisebenzise egameni lakho lesizinda, isibonelo,kungaba yi - .com .net .org nokunye okuningi, kuncike ngezinhloso zewebhusayithi yakho.
Ukukhethwa kwamagama angukhiye afanelekile kuyisici esibalulekile okufanele ucatshangelwe uma ukhethaigama lesizinda. Izinjini zokusesha zibonakala zithanda igama lesizinda elicebile elingukhiye. Kulesi simo, wenakufanele azame futhi asebenzise igama elingukhiye noma ibinzana ongathanda ukwandisa iwebhusayithi yakhobese uzama futhi uyikhiphe eduze kwegama lesizinda.
Ukubhaliswa kwe-Web Host
Kufanele uzame futhi ukuba ungabhaliswa igama lakho lesizinda nomphathi wakho wewebhu. Ngobauma unquma ukuhlukanisa izindlela nomphathi wakho (okuyinto evamile), kuba inhloko ukuhambaisizinda sakho futhi, uma kunjalo, kuyoba kuhle uma uwahlukanisa.